नयाँ शक्तिको बहार चलेको थियो । तर सबैतिर बाबुराम भट्टराईको पोस्टरमा छोपिएको थियो त्यो नयाँ शक्ति । बाबुराम भट्टराईको आकर्षक मुहारचित्रको विज्ञापन आक्रामक प्रचार शैलीको तहमा थियो । त्यसले नेपालका सबै पार्टी र सञ्चार माध्यमलाई खिनाउटे बनाएको थियो । मानिस प्रभावित भएका थिए । गोरखापत्र बाहेकका सबैले बाबुराम भट्टराईको फोटो छाप्न पाएका थिए । अखबारहरूको आम्दानी एकाएक बढेको थियो । टेलिभिजनहरूले नयाँ शक्तिको ‘लाइभ’ (प्रत्यक्ष) प्रसारण गरिरहेका थिए । यस्तो बेलामा फेसबुकको भित्ता बाबुराममय नहुने कुरै थिएन । त्यो त झन् हेरिनसक्नु नै भएको थियो ।
सबैतिर एकछत्र राज गरेको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग तर कुनै नयाँ सिद्धान्त रहेनछ । सिद्धान्त बिनाको पार्टी । यस्तो त मैले कहिल्यै सुनेको थिइन । त्यसैले मैले फेसबुकमा लेखिदिएँ– नयाँ शक्ति जन्मनासाथ म¥यो । किनभने यो नयाँ शक्तिसँग कुनै सिद्धान्त छैन । विचार छैन । सिद्धान्त र विचार नभएको नयाँ शक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । यो त औसरवादीहरूको भीड मात्र हो । ’
सिङ्गै दुनिया नयाँ शक्तिमय भएको थियो । हुरुरुरु आयो प्रतिकृया । पहिलो थियो अर्ति– सुरुमै नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन । अर्को थियो विश्वास– पुराना पार्टीका दिन गए । तेस्रो थियो चुनौती– अब नयाँ शक्ति संसद्मा पहिलो पार्टी हुन्छ ।
अर्थात् मैले, पार्टी हुन सिद्धान्त चाहिन्छ भनेर कुरो उठाएको थिएँ । जवाफ आयो नयाँ शक्तिले चुनाव जित्ने भयो भनेर । मैले कुरो थालें आग्लोबाट । जवाफ आयो गाग्रोबाट । दिक्क लागेर मैले फेसबुकमा राजनीतिक टिप्पणी गर्दिन भनें ।
नयाँ शक्ति चाहिँ तर साँच्चिकै नयाँ शक्ति रहेछ । पार्टी खोल्दा सिद्धान्त नचाहिने । खोलिसकेपछि सिद्धान्तको खोजी गर्ने । तर त्यो खोजी पनि अलमलमै रह्यो र त्यो सधैँ रहिरहनेछ । किनभने सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति बिनाको पार्टी छरपस्टिएको भीड मात्र हुनसक्छ । भीडका एकाध मान्छेले चुनाव जित्लान् । जितेका उदाहरण पनि छन् । तर भीडले देश र जनतालाई केही दिँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला दुई विचारधाराबीच टक्कर चलिरहेछ । एकातिर युरोपमा समेत असफल भैसकेको उदारवाद । (यसलाई मैले दलाल पुँजीवाद भन्ने नाम दिएको छु । ) अर्कातिर राष्ट्रिय पुँजीवाद । अहिले नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस दलाल पुँजीवादको मूल कार्यकारी भएको छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रिय पुँजीवादको प्रवक्ता हुन पुगेको छ । हुनत सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू राष्ट्रिय पुँजीवादको पक्षधर हुनु पर्ने थियो । तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो सैद्धान्तिक यात्राको टुङ्गो नलगाइसकेको हुनाले मैले एमालेलाई राष्ट्रिय पुँजीवादको प्रवक्ता भनेको हुँ ।
पार्टी घोषणा कार्यक्रम सकिएको हप्ता दिनपछि नयाँ शक्तिमा सैद्धान्तिक विवाद भन्ने समाचार पढियो । असाध्यै खुसी लाग्यो । सररर पढेँ । एउटा विचार रहेछ, वाम–लोकतान्त्रिक । अर्को रहेछ समतामूलक प्रजातन्त्र ।
ढिलै भए पनि सिद्धान्त खोज्ने काम राम्रो हो । विचारको विवाद पार्टीको जीवन हो । तर माथिका दुई विचारको सार खिचेपछि मन खिस्रिक्क भयो । किनभने यी दुवै विचार नेपालका लागि नयाँ होइनन् । दुवै विचार नयाँ शक्तिका मौलिक सोच पनि होइनन् । वामलोकतान्त्रिक भनेको नेकपा
(एमाले) ले पाचौं महाधिवेशनमा पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । राजनीति गर्ने गैरवाम नेपालीले समेत स्वीकार गरेको सत्य के हो भने – मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडाए । नयाँ नाम राख्ने बित्तिकै सिद्धान्त नयाँ हुँदैन । जनताको बहुदलीय जनवाद नै नेपाली सन्दर्भमा वाम–लोकतान्त्रिक सिद्धान्त हो । माओवादी उग्रवामपन्थी चेत भएको बेला स्वयं बाबुराम भट्टराईले यो वाम–लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ‘घाँसमा लुकेको हरियो सर्प’ भनेर तिरस्कार गर्नु भएको थियो । अहिले उहाँ स्वयंले त्यो सर्पको माला भिर्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएछ । नयाँ शक्तिको सैद्धान्तिक बहसमा वाम–लोकतान्त्रिक पक्षको विजय होस् । यो मेरो शुभकामना !
अर्को विचार अर्थात् समतामूलक प्रजातन्त्र चाहिँ नयाँ हो कि भनेर अलिक दिन खोज्नु प¥यो मैले । यो चाहिँ नेकपा एमाओवादीले, नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव गरेको वैचारिक अवधारणा रहेछ । एमाओवादीको भाका थियो – समावेशी समतामूलक गणतन्त्र । नयाँ शक्तिले समावेशी काटेर, गणतन्त्रलाई प्रजातन्त्रमा अनुवाद गरेर नयाँ बनाएको रहेछ ।
नेपालभित्रै अन्य पार्टीले आफ्नो परिचय बनाइसकेका विचारलाई नयाँ नाम दिएर आफ्नो बनाउन खोज्नु बेइमानी हो । नयाँ शक्ति पार्टीले यस्तो काम गरेर ‘प्रथमग्रासे मच्छिकापातः’ को उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
अर्थात् नयाँ शक्तिको नाउँमा धेरैले लगाएको आरोप ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ सही रहेछ । यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो नयाँ शक्तिले । नयाँ शक्तिसँग आधा दर्जन नयाँ विचारहरू थिए आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त बनाउन । अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि पार्टीले साहसपूर्वक घोषणा गर्न नसकेको दलाल पुँजीवादलाई आफ्नो राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गरेको भए नेपालका लागि त्यो मौलिक विचार हुन्थ्यो । अथवा स्टालिनदेखि एंगेल मर्केलसम्मका सबै सिद्धान्त र विचारको मिसमास गरिएको सारसङ्ग्रहवादी मान्यता अहिलेसम्मका कुनै पनि पार्टीले बोकेका थिएनन् । नयाँ शक्ति माथि भनिएका विकल्पमा गएको भए विचार नभएको पार्टीको टोपी ओढ्नु पर्ने थिएन ।
यथार्थमा नयाँ शक्तिको धरातल उत्तर आधुनिकता हो । उनीहरूका लागि यतिबेला इतिहास मरेको छ, सिद्धान्त मरेको छ । यतिबेला उनीहरूका लागि आपूm बाहेक सम्पूर्ण समाप्त भएको छ । भ्रमबाट मुक्त होस् नयाँ शक्ति । अहिलेलाई यत्ति ।
एउटा भ्रम हुर्किन थालेको छ नेपालमा । राजनीतिक क्रान्तिको समय सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नु पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भैसकेपछि क्रान्तिको रूपमा राजनीति सकियो । तर के राजनीतिभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि मुलुकको आर्थिक क्रान्ति अगाडि बढ्न सक्छ ? के राजनीतिक चेतबिनाको आर्थिक क्रान्ति हुन्छ ? हुँदैन ।
धेरै परको उदाहरणतिर नलागौं । भारत र चीन नेपालका दुई छिमेकी हुन् । दुवै मुलुक, औपनिवेशिक शासनबाट सँगसँगै मुक्त भएका हुन् । भारतले मुक्तिपश्चात् पनि विश्वबाट सकारात्मक सहयोग पायो । राष्ट्रमण्डलको बलियो आड पायो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहज प्रवेश पायो । तर चीनले मुक्तिसँगै असहयोग, बहिष्कार, नाकाबन्दी झेल्नु प¥यो । पश्चिमाहरूले चीनको थायवान प्रान्तलाई सिङ्गो चीनको प्रतिनिधित्वको अधिकार दिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी समितिमा विराजमान गराए । नजिकै रहेको एउटा मात्र मित्र राष्ट्र सोभियत सङ्घसँग पनि उसको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीन आज विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति भएको छ । र केही वर्षमा त्यो अमेरिकालाई पनि उछिनेर पहिलो शक्ति घोषित हुने तयारीमा छ । भारत कता छ, सबैले मिलेर खोज्नु पर्ने भएको छ ।
यस्तो किन भयो ? किनभने चीनको विकास नीति अहिले पनि राजनीतिसँग जोडिएको छ । सांस्कृतिक क्रान्तिको भयावह समाजवादलाई सम्पूर्णतामा तिरस्कार गरेर, तङ स्याओफिङले बिरालो सिद्धान्तको नयाँ नीति तर्जुमा गरेपछि चीनले अभूतपूर्व रूपमा विकास ग¥यो । सुरुमा समुद्री किनारको उत्पात विकास भएपछि चीन भित्री क्षेत्रतिर लाग्यो । अहिले त्यसले एकदम थोरै विकास भएको पश्चिम दक्षिण र पश्चिम उत्तरमा विकास कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेको छ । त्यो विकासको नमुना हामीले तिब्बतमा देखिसकेका छौं । त्योभन्दा पनि पछिल्लो समयमा चीनले विकासको लागि भनेर अगाडि सारेको सिल्क रोड र सामुद्रिक सिल्क रोडमा पनि राजनीतिले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । तर भारत ? धेरै नबोलौं । तिनीहरू अहिले पनि गालीगलौज र कुण्ठाको राजनीति गरिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपको आड खोजिरहेका छन् ।
नेपालमा पनि आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । यसको उदाहरण पनि हामीसँगै छ । नेपाली काँग्रेसको सरकारले २०४८ मा ल्याएको सम्पूर्ण निजीकरणको सिद्धान्तले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक विकासमा चुकुल लगायो । सारा उद्योगधन्दा ध्वस्त पारियो । नेपालको श्रम र पैसाले नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने कुरो कल्पना भयो । तर २०५१ को मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणले नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ बाटो खोल्यो । नेकपा (एमाले) सरकार बन्दैनथ्यो भने बाटो, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा अवधारणा, नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा कहिल्यै लेखिँदैनथ्यो ।
हामी सबै नेपालीले कुन कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको विकासको अवधारणाले नै नेपालको हित गर्छ । राजनीति बाहिरको विकासे अवधारणाले नेपाललाई हरिकङ्गाल बनाउने बाहेक अर्को कुनै काम गर्दैन ।